Mayur Times || मयूर टाइम्स || Authentic news from Nepal, Business Politics Society Art and many more ... » आमा बन्दै नेहा कक्कर, आफैले गरिन् खुलासा….
आमा बन्दै नेहा कक्कर, आफैले गरिन् खुलासा….
२०७७ पुस ३ गते शुक्रबार ०८:२३
भारतीय गायिका नेहा कक्करले आफ्ना फ्यानहरूलाई सर्प्राइज दिने कुनै पनि मौका छोड्दिनन्। दुई महिना पहिले अचानक आफ्नो बिहेको खबर सुनाएर नेहाले सबैलाई सर्प्राइज दिएकी थिइन्। यतिबेला भने नेहाले आफ्नो बढेको पेट देखाउँदै आफू गर्भवती...
भारतीय गायिका नेहा कक्करले आफ्ना फ्यानहरूलाई सर्प्राइज दिने कुनै पनि मौका छोड्दिनन्। दुई महिना पहिले अचानक आफ्नो बिहेको खबर सुनाएर नेहाले सबैलाई सर्प्राइज दिएकी थिइन्। यतिबेला भने नेहाले आफ्नो बढेको पेट देखाउँदै आफू गर्भवती भएको खबरका साथ फोटो साझा गरेर आफ्ना फ्यानहरूलाई चकित पारेकी छन्।
खासमा नेहाले पति रोहनप्रीतसँगको एउटा सुन्दर फोटो इन्स्टाग्राममा साझा गरेकी छन्। जसमा नेहा गर्भवती भएको कुरा देख्न सकिन्छ। उक्त फोटोको क्याप्सनमा नेहा लेख्छिन्, “#KhyallRakhyaKar” अथवा “ख्याल राख्ने गर।” नेहा गर्भवती भएको कुराले उनका फ्यानहरू निकै उत्साहित भएका छन्।
नेहाको यो पोस्टपछि उनलाई सामाजिक सञ्जालमा बधाइको ओइरो लागेको छ। नेहाको पोस्टको कमेन्टमा उनका भाइ टोनी लेख्छन्, “म मामा बन्दै छु।” यस्तै नेहाका पति रोहनप्रीत कमेन्ट गर्छन्, “अब त धेरै नै ख्याल राख्नुपर्ने छ।” यतिबेला नेहाको उक्त फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ।
प्रकाशित मिति ३ पुष २०७७, शुक्रबार २०:२३